Burmese People: January 2009
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 03:27 41 comments
နိုင်ငံခြားရောက်ဦးသန့်နဲ့မြန်မာပြည်က ဦးသန့် 
ဦးသန့်ကို ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့တွင် အဖ ဦးဖိုးနှစ်၊ အမိ ဒေါ်နန်းသောင် တို့က ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ပန်းတနော် အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး အထက်တန်းပြ ကျောင်းဆရာ၊ ထိုမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီ၊ အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီ၊ ဗမာ့သုတေသနအဖွဲ့တို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်းများဦးစီးအဖွဲ့ အမှုဆောင်၊ ဂျပန်ခေတ် ပညာရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ဖဆပလအဖွဲ့၏ လူထုရေးရာတာဝန်ခံ စသဖြင့် တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် နေ့မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဦးသန့်၏ ဇနီးမှာ ဒေါ်သိန်းတင်ဖြစ်ပြီး သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ဦးသန့်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် အသက် ၆၅ နှစ် တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့၌ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရုပ်ကလာပ်ကို မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်သယ်ယူခဲ့သော်လည်း ထိုစဉ်က မဆလ အစိုးရ၏ ဂရုတစိုက် မရှိမှုကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အုံကြွကာ ‘ဦးသန့် ဈာပနအရေးအခင်း’ ပေါ် ပေါက်ခဲ့သည်။
ဤသည် မှာမြန်မာနိုင်ငံသားကုလသမ္မဂအထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ်တဦးဖြစ်ခဲ့သူဦးသန့်၏ ရာဇ၀င်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည် ။
မကြာမီက ဦးသန့်နှစ်တရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်းကို ကုလ သမဂ္ဂ မှထုတ်ဝေမည် ဆိုသည့်သတင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးအနေဖြင့်များစွာဂုဏ်ယုမိပါသည် ။သို့ နှင့် ရန်ကုန်သားလဲ အားလပ်ရက် တရက်တွင်ဦးသန့်အုတ်ဂူအား ဦးညွှတ်အလေးပြုလေအံ့ဟူ၍ နေအိမ်မှထွက်လာ ရာ လမ်း တ လျှောက်မှာတော့ဦးသန့်သည် တို့မြန်မာ နိုင်ငံသား..နိုင်ငံတကာကအလေးအမြတ်ထားရ တဲ့ မြန်မာတဦး. .မြန်မာဆိုတာကို ကမ္ဘာကသိစေခဲ့ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦး…ကမ္ဘာကအမြဲအမှတ်ရစေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ ကြီး…ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ထာဝရာလဲလျှောင်းရာအုတ်ဂူသို့ရောက်လေ လျှင် ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ဦးညွှတ် လိုက်လေမဟဲ့ လို့အားခဲပြီးလာလိုက်တာဗျာ…ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဖက် ရှိ ဦးသန့် အုတ်ဂူရှိရာသို ရောက်လေရာမှတော့ ကြီး စွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတော့တယ်ဗျာ…ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ပုံမှာမြင်တွေ့ ရတဲ့အတိုင်းပဲ ဗျာ… ဖုန်အလိမ်း လိမ်း နဲ့ ကြမ်းပြင်..သံချေးအထပ်ထပ်နဲ့ တံခါးကြီး…အတွင်းခန်းမကြီးအလယ်မှာတော့ အထီးကျန်တိတ်ဆိတ်နေ တဲ့ ဦးသန့်ရဲ့အုတ်ဂူကို လှမ်းတွေ့ လိုက် ရ ပါတယ်ဗျာ…အတွင်းသို့လဲ ၀င်ရောက် ကြည့် ရှု့မည် စိုးသဖြင့်သော့ခတ်ထားပါသည်….။သို့နှင့် ရန်ကုန်သားလဲ အပြင် ကနေ ပဲ ဂါရ၀ ပြုခဲ့ရပါတယ်ဗျာ…ဂါရ၀ ပြုခဲ့တယ်ဆို သော်ငြားလဲ အကြိမ်ကြိမ်အားရပါးရဦးညွှတ်အလေးပြုခဲ့ရသည်တော့မဟုတ်ပါ…. အကြိမ်ကြိမ် အားရ ပါးရ ဦးညွှတ်သည်ကို စစ်နောက်လိုက်ခွေးများတွေ့ သွားလေလျှင် အလေးပြုမိသည့် အတွက်ပုဒ်မ အသစ်ထွင်ကာ ထောင်နန်းစံနေရဦးမည်ကိုလဲစိုးရပါသေးသည်..အဲတော့ လဲ မသိမသာပေါ့နော့ …ပြီးနောက်မှာ အတွင်း အုတ်ဂူ ရှိရာသို့ သေသေချာချာ ကြည့် မိတယ်ဆိုရင်ပဲ အုတ်ဂူဘေးမှာခြောက်သွေ့ နေတဲ့ ပန်းခြင်းတခြင်းကိုတွေ့ မိ တယ် ဗျ…ပုံမှာကြည့် ပါ…ရန်ကုန်သားအတွေး မှာတော့ …ဟ…တို့မြန်မာ တွေ ဘယ်စိုးလို့လဲ ပေါ့ ဗျာ….အမှတ်တရ ပန်းခြင်းလေးတော့ထားဖော်ရသားပဲပေါ့ …ပန်ခြင်းမှာပါတဲ့စာတန်းလေးကိုသေသေချာချာဖတ်ကြည့် လိုက် မှာပဲအဖြေကပေါ်တော့တယ်ဗျာ…မနှစ်ကတည်းက ဘန်ကီမွန်းချသွားတဲ့ပန်းခြင်းဗျ…ဟုတ်ပေသားပဲမနှစ်က ဘန်ကီမွန်လာတုန်းက.. ဦးသန့်အုတ်ဂူ ကိုမြန်မာ့နည်းမြန်မာဟန်အပြည့် နဲ့ ထုံးသုတ်ပြီး အလေးပြု စေခဲ့တယ် လေဗျာ…အဲဒီတုန်းကပန်ခြင်းကအခုထိ …မသိမ်းရသေးဘူးဗျာ… တန်ဖိုးထား တတ် လိုက်ကြတဲ့မြန်မာ တွေပါဗျာ.. တကယ်ပါအံ့ရော…
လာမည့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁ဝဝ ပြည့်မည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တံဆိပ်ခေါင်း ၃ မျိုး ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ဝေမည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဦးသန့်၏ ရုပ်ပုံဖြင့် ထုတ်ဝေမည့် အမေရိကန် ဝ.၉၄ ဒေါ်လာ (၉၄ ပြား)တန်၊ ဆွစ်ဇာလန်ငွေကြေး ၁.၃ဝ ဆွစ်ဖရန့်စ်တန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ ငွေကြေး ၁.၁၅ ယူရို တန် တံဆိပ်ခေါင်းများကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေမည် ဆိုပဲဗျ… နိုင်ငံခြားရောက်ဦးသန့်နဲ့မြန်မာပြည်က ဦးသန့် တယောက် ထဲဆိုတာတော့ သေချာနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်….
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:090comments
Labels: လေးစားအပ်သူ များ........